कुन उमेरका महिलाले दिन्छन बढी याै*न सन्तुष्टि ?::देश र जनताप्रति समर्पित
कुन उमेरका महिलाले दिन्छन बढी याै*न सन्तुष्टि ?
किशोरावस्थाको समयमा सामान्यतया मान्छे सेक्सको विषयमा सबैभन्दा धेरै उत्सुक हुन्छ र त्यस्तो कौतुहलताको उमेरमा गरिने सेक्समा उसले सबैभन्दा धेरै सन्तुष्टी पाउँछ होला भन्ने आमधारणा छ । तर यो धारणा सही भने होइन ।
पछिल्लोपटक गरिएको एक अध्ययनले महिलाहरुको हकमा २८ वर्षको उमेरमा गरिने सेक्स सबैभन्दा आनन्ददायक हुने देखाएको छ तर पुरुषको हकमा भने सेक्समा सबैभन्दा धेरै मज्जा लिने उमेर ३३ वर्ष रहेको बताइएको छ ।
महिलाहरुले २८ वर्षको उमेरमा सेक्सबाट सबैभन्दा धेरै आनन्द लिने भएपनि उनीहरु २५ वर्षको उमेरमा सेक्सको मामिलामा धेरै सक्रिय हुन्छन् ।
त्यस्तै महिलाहरुले औषतमा १७ वर्षको उमेरमा आफ्नो कुमारित्व गुमाउने गरेका छन् ।
किन याै*न सम्बन्ध बारे नेपालीहरु खुल्दैनन् ? यस्ताे छ डाक्टरकाे भनाइ
के हाे डिस्पेरुनिया ? किन दुखाइ हुन्छ याै*न सम्बन्धकाे बेला
नियमित याै*न सम्पर्कले बच्न सकिन्छ यी ५ राेगबाट